ခရဈ‌တော်နှင့်အတူ အ‌သခေံခဲ့သည။ြ | Crucified With Christ! | Real Conversion
တရား‌ဒေသနာစာမူကို လော့ဈအိနျဂယျြလျရှိ Baptist Tabernacle အသငျး‌တော်၌ ၂၀၂ဝခုနှဈ မေလ (၁၇)ရကျ၊ သခငျဘုရား၏‌ည‌နေပိုငျးတှငျ Dr. R. L. Hymers, Jr. က ဟော‌ေြပာသညျ။
By Dr. R. L. Hymers, Jr., Pastor Emeritus
ငါသညျ ခရဈ‌တော်နှင့်အတူလကျဝါးကပျတိုငျမှာ အ‌သေခွံပီ။ သို့‌သော်လညျး အသကျရှငျ‌သေး၏။ ထိုသို့ဆို‌သော် ငါသညျ ကိုယျတိုငျအသကျမရှငျ၊ ခရဈ‌တော်သညျ ငါ၌ရှငျ‌တော်မူ၏။ ကိုယျခၙၡာ၌ ယခုငါရှငျ‌သောအသကျသညျ ဘုရားသခငျ၏သား‌တော်ကို ယုံကြညျွခငျးအားြဖင့်တညျ၏။ သား‌တော်သညျ ငါ့ကိုခဈြ၍ ငါ့အဘို့ ကိုယျကိုစှန့်‌တော်မူ၏။ (ဂလာတိ ၂း၂၀)
ခရဈ‌တော်နှင့်အတူအ‌သေခွံခငျးသညျ မညျသည့်အရာကို ဆိုလိုသနညျး? ကနျြုပျတို့သညျ ဝိညာဥျ၏အ‌မေှာငျထုကို ြဖတျ သနျးရမညျဟူ‌သော ၎င်းငျး၏အဓိပ္ဘာ်ယျကို ကျွနျ‌တော်ယုံကြညျပါသညျ။ ကနျြုပျတို့၏အွပဈများ၊ ပညတျတရား၏ဒဏျခတျွခငျး၊ ဤအရာ များကို နားလညျခံစားတတျရမညျ။ ကနျြ‌တော်တို့သညျ ခရဈ‌တော်နှင့်အတူ အ‌သေခွံပီး၊ ရှငျွပနျထ‌ေြမာကျခဲ့သညျ။
သငျးအုပျဆရာ ရီခီဝမျဘရနျသညျ အကဥျြး‌ထောငျထဲ၌ တဈ‌ယောကျတညျးချုဳပျ‌လေှာငျွခငျးခံနရေစဥျကာလအတှငျး ခရဈ‌တော်၏အ‌သေတတျွခငျးကို အ‌တှေ့အကြုံရှိခဲ့သူတဈဦးြဖဈပါသညျ။ သူ၏စာအုပျွဖဈသည့် ဘုရားသခငျ၏‌ေြမ‌အောကျတှငျ သူကခရဈ‌တော်နှင့်ဘယျလိုအ‌သေခံခဲ့လဲဟူသည့် အ‌တှေ့အကြုံကို ရှငျးြပခဲ့ပါသညျ။
ကနျြ‌တော် ဒီအကဥျြး‌ထောငျထဲမှာ နှဈနှဈတိုငျ‌နေခဲ့သညျ။ ငါ့မှာစာဖတျစရာ၊ ရေးစရာဘာမှမရှိ၊ ငါနှင့်‌ပေါငျးသငျး ရနျ ကနျြုပျ၏အ‌တှေးများသာရှိသညျ၊ ကနျြုပျသညျ‌ တှေး‌တောဆငျွခငျတတျသူတဈဦး မဟုတျခဲ့ပါ။
"> ကနျြ‌တော်ဘုရားသခငျကိုယုံသလား အခုစမျးသပျမဋ္ဌ‌ရောကျွပီ။ ကနျြ‌တော်တဈ‌ယောကျတညျးပါ၊ ဝငျ‌ငှေလစာမရှိ၊ စဥျးစားစရာထငျွမငျခကျြများလညျးမရှိခဲ့ပါ။ ဘုရားသခငျကကနျြုပျအားဆငျးရဲဒုက္ခ်များကိုသာ ကမျးလှမျးခဲ့သညျ။ သူ့ကို ဆကျခဈြရအုံးမလား?
"> တိတျဆိတျစှာ သဈပငျ‌ပေါၗက ြငိမျသကျွခငျးအသီးကိုသီးတတျသညျကို တွဖညျးြဖညျးသိလာရွပီ။ ဤတှငျ [တဈ‌ယောကျတညျးအကညျြး‌ထောငျထဲ]၌ပငျ ကနျြုပျ၏အ‌တှေးများနှင့် ခံစားခကျြများသညျ ဘုရားသခငျထံလှည့် လာခဲ့ြပီး၊ ညစဥျ ဆု‌တောငျးြခငျး၊ ကေျးဇူး‌တော်ချီးမှမျးြခငျးများြပုလုပျရငျး ြဖတျသနျးခဲ့ပါသညျ။ ကနျြ‌တော်သရုပျ‌ဆောငျ နေသညျ မဟုတျ‌ကြောငျး သိခဲ့ရပါြပီ။ ကနျြ‌တော်ယုံကြညျသညျ။ (ဘုရားသခငျ၏‌ေြမအောကျ၊ စာမကျြနှာ ၁၂၀.)
ခရဈ‌တော်နှင့်အတူအအသခံဖို့ဆိုတာ မညျသည့်အရာကို ဆိုလိုသနညျး? ကနျြုပျတို့သညျ ဝိညာဥျ၏အ‌မေှာငျထုကို ြဖတျ သနျးရမညျဟူ‌သော ၎င်းငျး၏အဓိပယျကို ကနျြ‌တော်ယုံကြညျပါသညျ။ ကနျြုပျတို့၏အွပဈများ၊ ပညတျတရား၏ဒဏျခတျခွငျး၊ ဤအရာများ ကို နားလညျခံစားတတျရမညျ။ ကႁ‌နျုပျတို့သညျ ခရဈ‌တော်နှင့်အတူ အ‌သေခွံပီး၊ ရှငျွပနျထ‌ေြမာကျခဲ့သညျ။
ငါကဲ့သို့‌သော ခေါငျးမာ‌သောသူသညျ “မိမိကိုယျကို ခရဈ‌တော်ထံသို့ လကျ‌ေြမာကျအရဋ္ဌံးမ‌ပေးခငျ၊ ခရဈ‌တော်နှင့်အတူ လကျဝါး ကပျတိုငျမှာ အ‌သေမခံမှီ” ဤကဲ့သို့ အချိနျကို ြဖတျသနျးရမညျ။ ကနျြုပျသညျ ကနြု်ပျဘဝ၏ရှဈဆယျေြမာကျနှဈတှငျ ရောကျရှိ‌နေ‌သော် လညျး ကနျြုပျသညျ ဤအမှနျတရားကို လေ့လာ‌နေဆဲပငျွဖဈသညျ။
ကနျြုပျသညျ ဆယျစုနှဈ‌ပေါငျးများစှာ“အွပငျလူ” ြဖဈခဲ့သည့် တရုတျဘုရားရှိခိုး‌ကေျာငျး၌ နေထိုငျွခငျးအားြဖင့် ဤအမှနျတရား ကို ဦးဆုံးသငျယူခဲ့သညျ။ ကနျြ‌တော်ထှကျခါသှားခငျြခဲ့‌ပေမယ့် ဘုရားသခငျက ထှကျသှားခှင့်မွပုခဲ့ပါ။ ဘုရားသခငျက ဟွေဗဲ ၁၀း၂၅၌ ကနျြ‌တော့်ကို ထှကျမသှားဖို့ ေြပာပါသညျ။ ဤကဲ့သို့ “ကနျြ‌တော်ခရဈ‌တော်နှင့်အတူအ‌သေခွံခငျး” စတငျခဲ့ပါသညျ။
နောကျတကြိမျ Marin ကောငျတီမှာရှိတဲ့ တောငျပိုငျးနှဈွခငျးစာသငျ‌ကေျာငျးမှာ ကှနျြ‌တော်စဈ‌ဆေးြခငျးခံခဲ့ရပါသညျ။ ပါ‌မောက္ခ အားလုံးနီးပါးသညျ မွပာငျးလဲ‌သောလဈဘရယျများြဖဈ၍ စာသငျခနျးတိုငျးလိုလိုတှငျ သမၿာကမျြးစာကိုအပိုငျးပိုငျးဖကျြ‌သော‌ကြောင့် ထို‌နေရာကိုကနျြုပျမုနျးတီးခဲ့သညျ။ ထို‌နေရာတှငျမ‌နေခငျြပါ။ သို့‌သော် ဘယျလိုပဲ‌ြဖဈ‌နေပါ‌စေ၊ ထို‌နေရာ၌ဆကျ‌နေရနျ ဘုရားသခငျက ကနျြ‌တော့်ကို စကား‌ြပာခဲ့ပါသညျ။ ညသနျး‌ခေါငျ‌ကေျာ်အချိနျ ကေျာငျးစာသငျကေျာငျး‌အဆောငျ၏ ကနျြ‌တော့်အခနျးထဲ၌ ဘုရားသခငျက ကနျြ‌တော့်ကို‌ခေါၗြပီး “ြငိမျသကျ‌သေးငယျ‌သောအသံ”ြဖင့် “ယခုမှစ၍ နောငျနှဈ‌ပေါငျးများစှာတိုငျ ဒီညအ‌ကြောငျးကို သငျစဥျးစားလိမ့် မညျ၊ သငျ၏အဓိကအလုပျကို သငျအို‌သောအခါမှ အစွပုလိမ့်မညျဟူ‌သော ငါ‌ေြပာခဲ့သည့်စကားကို သငျသတိရလိမ့် မညျ၊ ယခု‌ကြောကျရှံ့ြခငျးမရှိရနျသငျယူရလိမ့်မညျ၊ တဈစုံတဈ‌ယောကျမႂ ငါသညျသငျနှင့်အတူရှိမညျဟု မ‌ေြပာ‌သော်လညျး ငါသညျ သငျနှင့်အတူ ရှိမညျ”ဟု ဘုရားသခငျက စကား‌ေြပာခဲ့ပါသညျ။
ကနျြ‌တော်၏ပ‌ရောဖကျဆာြဖဈသည့် ဒေါကျတာ ဂိုဒနျဂရငျးက ဟိုငျမာ၊ သငျက တရား‌ဟောဆရာ‌ကောငျးတဈ‌ယောကျပါ၊ ဒါ‌ပေမယျ့ သငျွပဿနာဖနျတီးတာမရပျတန့်ရငျ တောငျပိုငျးနှဈွခငျးအသငျး‌တော်ကို ရမှာမဟုတျဘူးဟု ေြပာခဲ့သညျ။ ကနျြ‌တော်က သူ့ မကျြလုံးကိုကြည့်ြပီး အကယျ၍ထိုအရာသညျ အခ‌ကြေးများခဲ့‌သော်၊ ထိုအရာဟုတဈခုမမြလိုပါဟု ြပနျ‌ေြပာခဲ့သညျ။ (ကြောကျရှံ့မဋ္ဌအား လုံးကိုဆန့်ကငျြ၊ စာမကျြနှာ ၈၆)
ထို့‌နောကျ လော့ဈအိနျဂယျြလျွမို့သို့ဆငျးလာြပီး၊ ဤအသငျး‌တော်ကို စတငျခဲ့ပါသညျ။ နောကျဆုံးတှငျ ဂရိတနျက ကနျြ‌တော် နှင့်ဘ‌တောမတူလို့ အသငျး‌တော်ခှဲထှကျခဲ့ပါသညျ။ သူကမညျသည့်အရာကို မ‌ဘောမတူတာလဲ? ြပဿနာကိစ္ခများအတှကျ ကနျြ‌တော်၏ရဲရင့်စှာရပျတညျမဋ္ဌကို သူကမ‌ဘောမတူခဲ့ပါ။ သူက ဘုရားသခငျ၏သမၿာတရားအတှကျ ရပျတညျရနျကြောကျရှံ့‌နေသည့်ကြှကျ ငယျ‌လေးတဈ‌ကောငျပါ၊ ၙဋ္ဌတျဆကျပါတယျ၊ ကြှကျငယျ‌လေးရယျ󠄐!
နောကျဆုံး‌သောကာလ၌ မှားယှငျး‌သောအယူ‌ဖေါကျွပနျမဋ္ဌကာလအတှငျး ဘုရားသခငျအတှကျ ပ‌ရောဖကျွပုရနျ ဘုရားသခငျက ကနျြုပျအားြပငျဆငျ‌နေသညျကို ကနြု်‌တော်သိခဲ့ရပါသညျ။ (၂သကျ ၂း၃)
အွခားသူများက သငျသညျ ချီ‌ဆောငျွခငျးခံရမညျဟု‌ေြပာ‌နေစဥျ ငါက အမကျြ‌တော်မတိုငျမှီချီ‌ဆောငျွခငျးစာအုပျထဲတှငျ Marvin J. Rosenthal ေြပာထားသကဲ့သို့ များစှာ‌သော ဒုက္ခဆငျးရဲကို သငျွဖတျ‌ကေျာ်ရမညျဟု ေြပာမညျ။ ဂရိတနျကဲ့သို့‌သော အွခားသူတို့က သင့်ကိုအသဈ‌သောဧဝံ‌ဂေလိတရားဘကျသို့ ဆှဲ‌ခေါၗ‌ခငျြသော်လညျး ကနျြ‌ေ‌တာ်ဘာပဲကြုံကြုံခရဈ‌တော်အတှကျ ရပျ တညျပါဟု ေြပာမညျ။
ကနျြ‌တော် John Samuel ကို မမုနျးပါ။ သူသညျ ဤ‌နောကျဆုံး‌သောကာလ၌ ပ‌ရောဖကျွပုရနျ မခိုငျမာ‌သေးပါ။ သူသညျ လောငျကမျြးြခငျး၊ နာကငျြွခငျးများကြုံ‌တှေ့မညျစိုးရိမျ‌သော‌ကြောင့် ကနျြ‌တော်နှင့်အတူ‌နေရနျ ကြောကျရှံ့ခဲ့သညျ။ အ‌ကြောင့်မှာ သူ သညျ ခရဈ‌တော်နှင့်အတူအ‌သေမခံ‌သေးပါ။ ကနျြ‌တော်ကနာကငျြွခငျး၊ ေ‌လာငျကမျြးြခငျးများ ကြိမျ‌ပေါငျးများစှာ ကြုံ‌တှေ့ရွပီး ြဖဈသည့် အတှကျ နောကျထပျဤအရာများကို မ‌ကြောကျ‌တော့ပါ။
Dr. Cagan က ကနျြ‌တော်၏‌နောကျဆုံး‌သောကာလနှင့် စပျလနျြး၍ ခိုငျမာြခငျးတရား‌ဒေသနာ‌တော်များကို ကြိုကျနှဈသကျ သညျဟု ဆကျ‌ေြပာ‌နေပါသညျ။ ထိုအရာက ကနျြ‌တော်အတှကျ ခှနျအား‌ပေးြခငျးထကျ ပိုပါတယျ၊ အကယျ၍ သငျသညျ ခရဈ‌တော် နှင့်အတူအ‌သေခံသညျ မှနျပါက အယူ‌ဖောကျွပနျ‌သော ဤ‌နေ့ရကျကာလများတှငျ ကနျြ‌တော်၊ ဒေါကျတာ စီဂနျတို့နှင့်အတူလိုကျနိုငျ လိမ့်ြဖဈွပီး ၂သကျ ၂း၃၊ သငျသညျ ဘုနျးကြီး‌သောမာတုရ သော်၎င်းငျး၊ သငျးအုပျဆရာ Wurmbrand ကဲ့သို့ ြမင့်ြမတျဘုနျးကြီး‌သော ဝနျခံသူတဈ‌ယောကျွဖဈလိမ့်မညျ။
ငါသညျခရဈ‌တော်နှငျ့အတူ လကျဝါးကပျတိုငျမှာ အ‌သေခွံပီ။ သို့‌သော်လညျး အသကျရှငျ‌သေး၏။ ထိုသို့ဆို‌သော် ငါသညျ ကိုယျတိုငျမရှငျ၊ ခရဈ‌တော်သညျ ငါ၌ ရှငျ‌တော်မူ၏။ ကိုယျခၙၡာ၌ယခုငါရှငျ‌သောအသကျသညျ ဘုရားသခငျ၏သား‌တော်ကို ယုံကြညျွခငျးအားြဖင့်တညျ၏။ သား‌တော်သညျ ငါ့ကိုခဈြ၍ ငါ့အဘို့ ကိုယျကိုကိုယျ စှနျ့‌တော်မူ၏။ ဂလာတိ ၂း၂၀
ဒေါကျတာ တိ‌မော‌သေလငျးက ယ‌နေ့အသငျးသူ/သားအများစုက ကောငျးကငျအရာထကျ သူတို့ကိုသူတို့ခဈြကြ‌သော‌ကြောင့် ဘုရားသခငျ၏ အသံ‌တော်မကြားနိုငျ‌တော့ပါ။ သူတို့၏စိတျနှလုံးများခိုငျမာလာသွဖင့် သူတို့ပို၍သငျယူ‌လေ၊ သူတို့ကြားတာနညျး‌လေဟု သူ၏စာအုပျ “ဘုရားသခငျ၏နိုငျငံ‌တော်” ထဲ၌ ရေးသားထားသညျ။ လူအများစုက အ‌ေြခခံအမှနျတရားများကို လဈြလႂဴရဋ္ဌခဲ့ြပီး၊ ငါအား လုံးသွိပီဟု‌ထငျကြသညျ။ ထိုသူတို့အထဲမှ တချိဳ ့က သူတို့၏ဘဝမှာ အဓိကရညျရှယျခကျြကို‌တောငျ မ‌ေြပာနိုငျပါ။ Dr.A.W. က အောကျပါ ဥပမာကို ပေးထားခဲ့ပါသညျ။
သက္ကသိုလျ‌ကေျာငျးသားတဈ‌ယောကျကို “Bob သငျဘာ‌ကြောင့် ဒီမှာ‌လာ နေရတာလဲ?” ဟု‌ မေးခဲ့သညျ။
“ကနျြ‌တော် မင်္ဂလာ‌ဆောငျခငျြတယျ၊ ပိုကျဆံရှာရမယျ၊ ခရီးလညျးသှားခငျြ တယျ။”
“ဒါ‌ပေမယ့် Bobဒီအရာ‌တှေက အ‌ေြမာ်အွမငျ‌တွှေဖဈတယျ၊ ဒီအရာ‌တှေကို ခဗျာၤးလုပျရမယျ၊ နောကျွပီး သငျအသကျကြီးလာြပီး၊ သေသှားမယျ။ ခငျဗျားဘဝရဲ့ အဓိကရညျရှယျခကျြကဘာလဲ?”
“ငါ့ဘဝမှာ ရညျရှယျခကျြတဈခုခုရှိလား ငါမသိဘူး Bob က ေြပာကောငျး‌လိမ့် မယျ။”
လူအများစုက သူတို့ဘဝ၏ အဓိကရညျရှယျခကျြကို မသိကြပါ။ (“လူသား ၏ ရညျရှယျခကျြ၊” စာမကျြနှာ၂၇)
ခရဈယာနျတဈ‌ယောကျက သူတို့ဘဝ၏အဓိကရညျရှယျခကျြမှာ ကောငျးကငျဘုံသှားရနျွဖဈသညျဟု ေြပာနိုငျသညျ။ ဒေါကျ တာလငျးက ကောငျးကငျဘုံသို့သှားြခငျးသညျ အဓိကရညျရှယျခကျြွဖဈသညျဟူသည့် ကမျြးပိုဒျတဈပိုဒျမမြ‌တှေ့ရပါဟု ေြပာကြားပါ သညျ!
သင့်ဘဝ၏အဓိကရညျရှယျခကျြမှာ ၂တိ ၂း၁၂ မှ‌ေြပာကြားခကျြအတိုငျး ြဖဈရပါမညျ။ အပိုဒျငယျ၁၂၏ ပထမပိုဒျကိုဖတျပါ၊
“သညျးခံလငျြ၊ ထိုသခငျနှင့်အတူ စိုးစံလိမ့်မညျ၊ ...”
“ဒုက္ခခံရနျ”အဓိပ္ဘာယျမှာ “သညျးခံရနျ” ြဖဈသညျ။ ဗျာဒိတျကမျြး ၂၀း၆ မှာ “ဘုရားသခငျ၏ ယဇျပု‌ရောဟိတျ၊ ခရဈ‌တော်၏ယဇျပု‌ရောဟိတျွဖဈ၍ အနှဈတဈ‌ထောငျပတျလုံး ခရဈ‌တော်နှငျ့အတူ စိုးစံကြလိမျ့မညျ။” “ဒုက္ခခံရနျ”၏အဓိပ္ဘာယျမှာ “သညျးခံရနျ” ြဖဈ သညျ။ ၂တိ‌မော‌သေ၏ အဓိကအ‌ကြောငျးအရငျးကို ၂တိ‌မော‌သေ ၂း၁-၁၁၌ ပေးထားပါသညျ။
အ‌ပေါၗက အပိုဒျငယျ၁ ကို Sholdfield က “အယူ‌ဖောကျွပနျ‌သောကာလ၌ ‘ကောငျး‌သောစဈသား’၏‌ေြခလှမျး”ဟု မှတျသားထားပါ သညျ။ ခရဈ‌တော်နှင့်အတူ စိုးစွံခငျးကို ငှေတဈပိဿပုံဥပမာအားြဖင့် ရှငျလုကာ ၁၉း၁၁-၁၇ ၌ ြပသခဲ့ပါသညျ။ ခရဈ‌တော်နှင့်အတူ အုပျစိုးရနျ ြပငျဆငျသူများသညျ “ြမို့ဆယျွမို့ကို အုပျစိုးြခငျးအခှင့်အာဏာ” (အငယျ ၁၇)(သို့) “ငါးြမို့”ကို ပေးလိမ့်မညျ (အပိုဒျငယျ ၁၉)။ ဤအရာက အလှနျအစှနျး‌ရောကျလိမ့်မညျဟု ဒေါကျတာလငျးက ေြပာခဲ့သညျ။ ယခုဘဝမှာ သညျးခံနိုငျသူများက ခရဈ‌တော်နှင့်အတူ သူ၏နိုငျငံ‌တော်၌ စိုးစံခှင့်ရလိမ့်မညျ။ “ဒုက္ခခံရနျ”အဓိပ္ဘာယျမှာ “သညျးခံရနျ” ြဖဈသညျ။
ဒါဆိုရငျ ကနျြ‌တော်တို့မညျသည့်အရာကို သညျးခံရမလဲ? ဤ‌လောကကို မခဈြွခငျးအားြဖင့် အစဥျသညျးခံရမညျ။
လောကကို၎င်းငျး၊ လောက၌ရှိ‌သောအရာတို့ကို၎င်းငျး၊ မခဈြကြနှငျ့။ လောကကိုခဈြခဈြ‌သောသူ မညျ သညျကား၊ ခမညျး‌တော်ကို ခဈြွခငျး‌မေတ္ဒာမရှိ။ လောက၌ရှိသမျှ‌သောအရာတညျးဟူ‌သော ကိုယျ ကာယတပျမကျွခငျး၊ မကျြစိတပျမကျွခငျး၊ လောကီ စညျးစိမျ၌ဝါကြှားြခငျးတို့သညျ ခမညျး‌တော်နှငျ့ မစပျဆိုငျ၊ လောကနှငျ့သာစပျဆိုငျကြ၏။ လောကနှငျ့‌လောကီတပျမကျွခငျးသညျ‌ ေ‌ရ့ွသှားကှယျ‌ပေျာကျကှယျတတျ၏။ ဘုရားသခငျ၏အလို‌တော်နှငျ့အညီ ကငျြ့‌သောသူမူကား၊ နိစ္ဇ်ထာဝရတညျ၏။ ၁‌ ယော ၂း၁၅-၁၇
ကနျြ‌တော်တို့သညျ အသငျး‌တော်ကို ခှဲမထှကျွခငျးအားြဖင့် သညျးခံရမညျ။
ထိုသူတို့သညျ ငါတို့ထံမှထှကျသှားကြ၏။ သို့‌သော်လညျး အထကျကငါတို့နှငျ့မစပျဆိုငျကြ။ ငါတို့နှငျ့ စပျဆိုငျလျှငျ ငါတို့နှငျ့အတူ‌နေကြလိမျ့မညျ။ ထိုသူ‌ပေါငျးတို့သညျ ငါတို့နှငျ့မစပျဆိုငျ‌ကြောငျးကို ထငျရှား‌စွေခငျးငှါ၊ ငါတို့ထံမှ ထှကျသှားကြ၏။ (၁‌ ယော ၂း၁၉)
မှားယငျး‌သောဆရာများ‌နောကျသို့လိုကျရနျ ြငငျးပယျွခငျးအားြဖင့် သညျးခံရမညျ။
ခဈြသူတို့၊ ခပျသိမျး‌သောစိတျဝိညာဥျတို့ကို မယုံကြနှငျ့။ စိတျဝိညာဥျတို့သညျ ဘုရားသခငျနှငျ့ စပျဆိုငျ သညျ မစပျဆိုငျသညျကို စုံစမျးကြ‌လော့။ အ‌ကြောငျးမူကား၊ မိစ္ဈာ်ပ‌ရောဖကျအများတို့သညျ ဤ‌လော ကသို့ သှားကြွပီ။ ၁ ယော ၄း၁
ဘုရားသခငျကို ကေနြပျ‌စေ‌သောအရာများ လုပျ‌ဆောငျွခငျးအားြဖင့် သညျးခံရမညျ။
ငါတို့သညျ ပညတျ‌တော်တို့ကို စောင့်‌ရေှာကျ၍၊ နှဈသကျ‌တော်မူ‌သောအကငျြ့တို့ကို ကငျြ့‌သော‌ကြောင့်၊ ဆု‌တောငျးသမျှတို့ကို ဘုရားသခငျ့ထံ‌တော်မှရကြ၏။ ၁‌ ယော ၃း၂၂
ဘုရားသခငျ၏ပညတျ‌တော်များ စောင့်‌ရေှာကျွခငျးအားြဖင့် သညျးခံရမညျ။
ငါတို့သညျ ပညတျ‌တော်တို့ကို စောင့်‌ရေှာကျ၍၊ နှဈသကျ‌တော်မူ‌သောအကငျြ့တို့ကို ကငျြ့‌သော‌ကြောင့်၊ ဆု‌တောငျးသမျှတို့ကို ဘုရားသခငျ့ထံ‌တော်မှရကြ၏။ ဘုရားသခငျ၏ပညတျ‌တော်ဟူမူကား၊ သား တော်‌ယေရဋ္ဌခရဈကို ယုံကြညျရမညျ။ သား‌တော်ပညတျ‌တော်မူသညျအတိုငျး၊ အခငျြးခငျြး ခဈြရမညျ ဟူ‌သောပညတျ‌တော်‌ပေတညျး။ ၁‌ ယော ၃း၂၂
ကနြု်ပျတို့၏ဆရာများထံသို့ အပျနှံြခငျးအားြဖင့် သညျးခံရမညျ။
ဘုရားသခငျ၏နှုတျကပတျတရား‌တော်ကို သငျတို့အား ဟော‌ေြပာ၍၊ သငျတို့ကိုအုပျ‌သောသူတို့ကို အောကျ‌မေ့ကြ‌လော့။ သူတို့သညျ အဘယျသို့ကငျြ့ကြွံပုမူ၍ စု‌တေ့သညျကို စေ့‌စေ့ဆငျွခငျလကျြ၊ သူတို့ ၏ယုံကြညျွခငျးကို မှီ‌အောငျလိုကျကြ‌လော့။ သငျတို့ကို အုပျ‌သောသူတို့၏စကားကို နား‌ထောငျ၍နှိမျ့ချ လကျြ‌နေကြ‌လော့၊ သူတို့သညျ ကိုယျတိုငျစဈ‌ကြောြခငျးကိုခံရ‌သောသူကဲ့သို့၊ သငျတို့စိတျဝိညာဥျ၏ အကျိဳးအလိုငှါ‌စောငျ့‌နေကြကုနျ၏။ သငျတို့အကျိုးကို မွဖဈ‌စေတတျ‌သောဝမျးနညျးြခငျးမရှိ၊ ဝမျး‌ေြမာကျ ြခငျးရှိ၍၊ သူတို့သညျစဈ‌ကြောြခငျးကို ခံရမညျအ‌ကြောငျးသတွိပုလကျြ‌နေကြ‌လော့။ ဟွေဗဲ ၁၃း၇၊၁၇
ြငိမျဝပျစှာ ဘုရားအမဋ္ဌ‌တော်၌အွမဲတမျးပါဝငျွခငျးအားြဖင့် သညျးခံရမညျ။
ထို‌ကြောငျ့ ငါခဈြ‌သောညီအဈကိုတို့၊ သငျတို့သညျ သခငျဘုရား၏အမဋ္ဌ‌တော်ကို ဆောငျရှကျ၍အကျိဳး ကြီးသညျကို သိမှတျသွဖင့် တညျကြညျ‌သောစိတျနှငျ့ ြပည့်စုံ၍၊ မရှေ့လႂာ့မတိမျးယိမျးဘဲလကျြ၊ သခငျ ဘုရား၏အမဋ္ဌ‌တော်ကို ကြိုးစားအားထုတျကြ‌လော့။ ၁‌ကော ၁၅း၅၈
ဤအရာများကို သညျးခွံခငျးအားြဖင့် ဘုရားသခငျကကနြု်ပျတို့ကို ြပုြပငျသှနျသငျမညျွဖဈွပီး၊ ခရဈ‌တော်နှင့်အတူ သူ၏နိုငျငံ‌တော်ထဲ၌ စိုးစံခှင့်ရမညျွဖဈသညျ။
ငါသညျ‌အောငျွမငျ၍ ငါ့ခမညျး‌တော်၏ ပင်္လီငျ‌တော်‌ပေါၗမှာ ခမညျး‌တော်နှငျ့အတူထိုငျ‌နေသကဲ့သို့၊ အောငျွမငျ‌သောသူသညျ ငါ၏ပင်္လီငျ‌ပေါၗမှာ ငါနှငျ့အတူထိုငျ‌နေရ‌သောအခှငျ့ကို ငါ‌ပေးမညျ။ ဝိညာဥျ‌တော်သညျ အသငျး‌တော်တို့အား အဘယျသို့မိနျ့‌တော်မူသညျကို နားရှိ‌သောသူမညျ သညျကား ကြားပါ‌စေဟုမိနျ့‌တော်မူ၏။ (ဗျာဒိတျ ၃း၂၁-၂၂)
တရုတျနိုငျငံ၊ ကှနျွမူနဈ အကဥျြး‌ထောငျထဲမှာ သငျးအုပျဆရာ Wang Ming Dao သညျ နှဈ‌ပေါငျး (၂၂)တိုငျ ကုနျးဆုံးခဲ့ပါသညျ (၁၉၀၀-၁၉၉၁)။ သူ‌ေြပာခဲ့သညျမှာ -
တချိဳ ့က ယ‌နေ့အသငျး‌တော်အ‌နေနဲ့ ဘယျလမျးကိုသှားသင့်လဲဟု ကနျြ‌တော့်ကို‌မေးခဲ့ပါသညျ။ ကနျြ‌တော်က မလှဲမ‌သှေ သစ္ဇာရှိစှာ‌သေသည့်တိုငျ‌အောငျ‌လေႂာကျခဲ့သည့် တမနျ‌တော်တို့၏‌ေြခ လှမျး‌နောကျ လိုကျသှားသင့်သညျဟု ေြဖကြားသညျ။ သူသညျ ဒေါကျတာ ဂနျြဆုနျ၏နာ‌ရေး အတှကျ တရား‌ဟော‌ပေးခဲ့သညျ။ အကဥျြး‌ထောငျထဲ‌နေစဥျကာလအတှငျး ကာလအတှငျး သူ သညျ သူ၏သှားများ၊ အကြား၊ အွမငျဆုံးရဋ္ဌံးခဲ့ရသညျ။ အကညျြး‌ထောငျထဲ‌မှလှတျ‌ေြမာကျွပီး၊ သူ နဲ့သူ၏ဇနီးတို့သညျ သူတို့‌နေထိုငျရာတိုကျခနျး၌ သူတို့‌သေဆုံးသည့်အထိ (၁၉၉၁) ခရဈယာနျ များကို သှနျသငျ‌ဝေငှခဲ့ပါသညျ။
ကေျးဇူးြပု၍ အားလုံးမတျရပျွပီး၊ ဓမဩီခငျြးကိုသီဆိုကြပါ။
နာမ‌တော် ကြောကျရှံ့ရမညျလား၊ နာမ‌တော်ကို ရှကျကြောကျ
သာယာပနျးများ‌ ဝေဆာကုတငျ၊ ကောငျးကငျသို့ သယျ‌ဆောငျမလား
ြခားသူများ‌ အောငျပှဲဆှတျခူးစဥျ၊ အ‌သှေး‌ပငျလယျွဖင့် စီး‌မေျာ
သူရနျများ ရငျဆိုငျရနျမရှိ၊ လှမျးမိုးြခငျး ငါရပျတန့်
ဤလောက ကေျးဇူးမိတျ‌ဆှေလား၊ ဘုရားထံ ကူညီ‌တောငျး
ငါစိုးစံရငျ ငါတိုကျရမညျ၊ ရဲစှမျးသတ္ဒိ တိုးပှား‌စေ
ငါပငျပနျးခံ နာကငျြမဋ္ဌ သညျးခံ၊ ၙဋ္ဌတျကပတျ‌တော်ြဖင့် ထောကျမ။
(၁၆၇၄-၁၇၄၈ခုနှဈ အိုကျဇကျဝကျဈ) သီကုံး‌သော ကားတိုငျ၏စဈသညျ‌တော်ကျဴးဓမ်ဩီခငျြး)